‘तानाजी’ र ‘छपाक’ मा कसको कमाई बढी ? « THULOPARDA.COM
‘तानाजी’ र ‘छपाक’ मा कसको कमाई बढी ?
शुक्रवारबाट प्रदर्शनमा आएका दुई चलचित्र अजय देवगनको ‘तानाजी’ र दीपिका पादुकोणको ‘छपाक’ ले पहिलो दुई दिनमा राम्रो ओपनिङ हासिल गरेको छ । तर, स्क्रिन संख्याका कारण अजय देवगनको चलचित्रले ‘छपाक’ भन्दा तीन गुना बढी कमाई गरेको छ । दीपिकाको चलचित्र ‘छपाक’ ले पहिलो दिन ४ करोड ७७ लाख र दोस्रो चलचित्रले ६ करोड ९० लाख छापेको छ ।
कम बजेको यो चलचित्रलाई राम्रो प्रतिक्रिया मिलेको छ । मेघना गुलजार निर्देशित चलचित्र लामो रेसको घोडा बन्ने अनुमान गरिएको छ । यो चलचित्र एसिड अट्याक सर्वाइभर लक्ष्मी अग्रवालको जिन्दगीमाथि आधारित भएर निर्माण भएको हो । यसमा दीपिका मालती नामकी एक साधारण युवतीको भूमिकामा देखिएकी छन्, जोमाथि केही युवकले एसिड अट्याक गर्छन् ।
त्यस्तै, अजयको ‘तानाजी’ ले १५ करोड १० लाखको कमाईसँगै ओपनिङ गरेको थियो । दोस्रो दिन चलचित्रले कमाईमा ठूलो उछाल कायम गर्‍यो । चलचित्रले शनिवार २० करोड ५७ लाखको कमाएको छ । योसँगै चलचित्रको दुई दिने कमाई ३५ करोड ६७ लाख भएको छ । चलचित्रले वीकेन्डमा अझ राम्रो प्रदर्शन गर्ने अनुमान गरिएको छ । चलचित्रमा सैफ अली खान पनि छन् ।
अजय देवगनको चलचित्र ‘तानाजी’ लाई भारतमा ३ हजार ८ सय ८० स्क्रिन मिलेको छ । भने, ओभरसीजमा यो चलचित्र ६ सय ६० स्क्रिनमा रिलिज भएको छ । चलचित्रले संसारभर ४ हजार ५ सय ४० स्क्रिन पाएको छ । त्यस्तै, दीपिका पादुकोणको ‘छपाक’ ले भारतमा १७ सय स्क्रिन पाएको छ । त्यस्तै, ओभरसीजमा यो चलचित्र ४ सय ६० स्क्रिनमा प्रदर्शन भएको छ ।
टाइगरलाई मोटाउने चिन्ता
बलिउडका चर्चित अभिनेता टाइगर श्राफले भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै घरभित्र समय बिताइरहेको बताएका छन्
बलीउड गायिका कनिका कपूरलाई कोरोना पोजेटिभ
बलीउड गायिका कनिका कपूरलाई कोरोना पोजेटिभ पाईएको छ । उनि ९ मार्चमा लण्डनबाट भारत फर्केकी
विपन्न चलचित्र प्राविधिकलाई सहयोग गर्न संघको अपिल
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले ‘लकडाउन’ घोषणा गरेपछि चलचित्रमा ज्याला मजदुरी गर्ने प्राविधिकहरुलाई आर्थिक
निखिल भन्छन्, ‘साँझको ५ बजेपछि सर्नु हुँदैन भन्ने कोरोनालाई थाहा छैन’
कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले ‘लकडाउन’ गरेपछि धनाड्य हुन् वा मजदूर, सबै घरभित्र नजरबन्द हुनुपरेको
कोरोना भाइरसको महामारीबाट देशलाई जोगाउन सरकारले ‘लकडाउन’ गरेपछि अहिले इन्टरनेटको सुविधा हुनेका लागि युट्युब दिन